SOICARE ceeryaamo qabow iyo ceeryaamo diirrimaal oo dusha sare ah ayaa hawada ka buuxiya qoyaanka hawada, Shiinaha SOICARE ceeryaamo qabow iyo hawo nadiif ah dusha sare ee hawo nadiifinta hawada soosaarayaasha, Shirkadaha, Warshadaha - Sunpai warshadaha xadidan.
SOICARE ceeryaamo qabow iyo aalad diiriyayaal dusha sare ku buufiyaan hawo kululeeyaha hawada
Caano qabow: 18H, Caano Diirran: 10H
Mist diirimaad: 550ml / H, Cool Mist:300ml / H
Qeybaha 100000 bishiiba
Humidifier-kan oo leh laba nooc oo haad ah, ceeryaamo qabow iyo ceeryaamo diirran.
1. Waxqabadka iyo astaamaha:
1). Bandhig heer sare ah oo LED ah
2). Saddex heerar oo dirxiga qabow iyo diiran diirimaad ayaa la heli karaa
3). Waqtiga shaqeynta saacadaha 1h ilaa 12h
4). Dejinta qoyaanka laga bilaabo30% ~ 90%
5). Qoyaanka waxaa dejiya 5% kasta. Marka qoyaanku gaaro qiimaha dejinta, mashiinka ayaa joogsan doona shaqada. Marka qoyaanka qolka uu ka hooseeyo qiimaha dejinta 5%, mashiinka ayaa dib u bilaabaya inuu shaqeynayo
6). Iyada oo leh wax caraf udgoon
7). Laba heer, 360 nozzles wasakh wareejin kara
8). Ilaalinta biyo yaraanta
9). Si otomaatig ah u jooji shaqada markaad kor u qaadayso haanta biyaha
10). Qaabka hurdada
11). Nalka LED-ka waa la damin karaa si loo yareeyo carqaladeynta iftiinka hurdada. Xaaladda hurdada, mashiinku wuxuu istaagi doonaa isagoon wax cod ah jirin markii biyi la aan yahay, LED-ku wuxuu tusayaa batoonka biyo la’aanta ah.
12). Kontoroolka fog waa ikhtiyaari
13). Awood siinta sare ee buuxinta taangiga biyaha
14). Awooda huurinta ballaaran, kordhinta huurka qolalka oo idil si siman
15). Dhexgalka heerkulka sare ee gudaha wuxuu sameeyaa qoyaan caafimaad leh.
1). Adeegso tikniyoolajiyadda kuleylka PTC, heerkulka biyaha ayaa lagu kululayn karaa 100℃ Si loo dilo bakteeriyada loona uumi baxo sida haadka kulul.
2). U adeegso ultrasonic Transducer ultrasonic si aad u soo saartid ceeryaanta qabowga
3). Qulqulka, 100-ka ℃ ceeryaanta kulul waxay isku daraa oo waliba kuleylka ku wareejiyaa ceeryaanta qabow si ay u disho bakteeriyada. Heerka jeermisku wuxuu gaari karaa 99.53%. Heerkulka diirrimaadka diiran ee la soo saaray waa qiyaastii 60℃ waxaana ku afuufay taageere hawada gudaheeda.
Gawaarida otomaatiga marka aan biyo la helin
550mL / saac
300mL / saac
Isku qas saliidaha lagama maarmaanka ah ee neefsashada ilaaliya saliida muhiimka u ah Diffuser
SOICARE humerifier ceeryaamo diffuser 5.5L sare buuxi uumiyaha ultrasonic ee biyo sifeynta hypochlorous iyadoo la adeegsanayo